दु:खद ख'बर , भारत गएका चार नेपा'लीको स'ड'क दु'र्घ'टना'मा मृ'त्यु - SudurSanchar
दु:खद ख’बर , भारत गएका चार नेपा’लीको स’ड’क दु’र्घ’टना’मा मृ’त्यु
काठमाडौं, फागुन २२ ।
रोजगारीको शिलशिलामा भारत गएका चारजना नेपालीको स्वदेश फर्किने क्रममा सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका खर्चे गैराका उनीहरूको भारतको उत्तरप्रदेशस्थित नोयडामा दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो। उ
नीहरू मुम्बईबाट नोयडा हुँदै नेपाल आउँदै थिए।
मृत्यु हुनेमा कालो रावल, उनकी पत्नी बुदी रावल, छोरा टोपेन्द्र रावल र तिलक घर्ती रहेका छन्। यो पनि…..
बाँकेमा एक अनौठो घटना भएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका ९ मा एकै घरका देउरानी जेठानी हराएका थिए ।
देउरानीको केही वर्ष अघि विवाह भएको थियो भने जेठानीको केही महिना मात्र भएको थियो ।
जेठानी खगिसरा फेला परेकी छैनन् भने देउरानी एक होटलमा फेला परेको बताइएको छ ।
उनीसंग केही युवा समेत रहेको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।
संगीता बस्याल (देउरानी) हराएको दुई दिन पछि सम्पर्कमा आएपछि खोजी गर्दै जाँदा फेला परेको अमाजुले बताएकी छन् ।
परिवारका सदस्यले घरका २ बुहारी हराएको भनेर सार्वजनिक गरेपछि देउरानी आफै सम्पर्कमा आएको परिवारका सदस्यको भनाई छ । तर अझै जेठानी भने सम्पर्कमा आएकी छैनन् ।
श्रीमानहरु रोजगारीमा वाहिर रहेको बेलामा घरमा रहेका उनीहरुका श्रीमतीहरु एकाएक हराएका हुन् ।
उनीहरुका श्रीमानले कामवाट आउँछौं भनेपछि एकाएक दुई देउरानी जेठानी हराएका हुन् । आफुहरु घरमा आएपछि परिवारमा श्रीमतीहरुले अन्य युवा घरमा ल्याएर र क्सी खाँदै रमाइलो गर्ने गरेको थाहा पाएको बताएका छन् । दुवै जनाले प्रेम विवाह गरेका थिए ।
फुटपाथमा सुतेका मजदुरमाथि ट्रक दौडियो, १३ जनाको मृत्यु
बेलायतमा नेपालीका लागि खुल्यो ठूलो अवसर: वर्क परमिट भिषा खुल्यो, ३० लाख भन्दा बढी वार्षीक तलब
भर्खरै विमान दु’र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा माया भए #RIP लेख्नुहाेस्
दुवई लगेर नेपाली पुरुषलाई नै बेच्न खोजिएपछि….
यी चर्चित कलाकारको रोमान्टिक प्रेम प्रस्ताव, जुन पढेर चकित हुनुहुनेछ !
Breaking News : नर्सिङ होममा आगलागी ११ जनाको दुःखद अन्त्य!